Be tsy ahoana: maro raiamandreny fa vitsy manam-panahy ny Malagasy | NewsMada
Be tsy ahoana: maro raiamandreny fa vitsy manam-panahy ny Malagasy
Mitotongana andro aman’alina ny firenena. Saika amin’ny lafiny manontolo mihitsy no ahitana izany. Fahantrana, tsy fahampiana, soloky, tsindrio fa lavo, fanararaotana, sns, misy sy manjaka eto Madagasikara avokoa. Tsy hanavahana fa tratran’io rehefa mety sehatra iriariavan’ny Malagasy. Fa nahoana ary no toa lasa firenena voaozona ity tany ity?
Ny hitsikitsika tsy mandihindihy foana fa ao raha, hoy ny fahendren’ny Malagasy. Misy zavatra hafahafa ao matoa tonga amin’izao toerana misy azy izao ny fiarahamonina malagasy. Nanjary tsy mifampatoky intsony. Feno herisetran’ireo be vola, be sandry, sns. Ivezivezen’ny soloky, ny halako bika tsy tiako tarehy. Fiarahamonina hanjakan’ny samy maka ho azy… Amin’ny ankapobeny, manangasanga ny faharavan’ilay fahendrena sy soatoavina malagasy raha tsy mitandrina fatratra ny rehetra!
Raha tsiahivina, azo isaina amin’ny rantsantanana an’ila ny raiamandreny fahiny tao anatina fiarahamonina iray. Tsy izy ireny no manendry tena ho raiamandreny fa ny mpiaramonina no mametraka azy ho eo amin’izany toerana faran’izay saro-pady izany. Sady fakan-kevitra no to teny, mpitahiry ny fomba amam-panao sy ny raki-pahendrena, mizana be tsy mitanila, sns, izy ireny, hany ka nirindra fatratra ny fiainam-piarahamonina malagasy.
Nanjary be tsy ahoana fotsiny
Ny mahavariana anefa dia ity, manana raiamandreny marobe ny Malagasy ankehitriny fa tsy sahala amin’ny teo aloha kanefa tsy mitsaha-mitotongana ny fiainam-piarahamonina malagasy. Rafi-pitondrana isan’ambaratonga, hoentina raiamandreny. Fikambanana maniry toy ny anana, tantanina raiamandreny. Antokom-pinoana tsy tambo isaina mameno elakelan-trano, sahanina raiamandreny ara-panahy… Izany hoe, nanjary marobe ireo raiamandreny eto Madagasikara, saingy be tsy ahoana fotsiny matoa madiva ho rava tahaka izao ilay fahendrena sy soatoavina niainan’ny fiarahamonina malagasy fahiny.
Raiamandreny anarany fotsiny fa tsy hita izay fiahiana vitany. Raiamandreny tia doka sy laza ka tsy mahita akory fa misy lamina tsy mandeha araka ny tokony ho izy ao anatin’ny sehatra iadidiany. Raiamandreny tsy mahatsinjo sy tsy mitsinjo akory ny hoavin’ireto “ondry” andrasany. Raiamandreny tia sy milomano ao anaty fihatsarambelatsihy ka tsy mahita ny tena maharary eo anivon’ny fiarahamonina…
Ilay fanahy mihitsy no nosoloina
Antony goavana niteraka io “be tsy ahoana” io ny fanoloana ilay fanahy maha olona amin-javatra hafa, toy ny vola, ireo hery isan-karazany, fahefana isan-tsokajiny, sns. Zary nitondra fanjakazakana sy fizahozahoana ireny, hany ka very tanteraka ilay fanahy naha Malagasy ny Malagasy hatramin’izay. Tsy nahatazona ny maha raiamandreny azy intsony ny raiamandreny taty aoriana fa variana tamin’ny adin’akoholahy ka nanadino ny adin’ombalahy.
…Satria efa tsy azo sakanana intsony ity fanendrena sy fifidianana ary fametrahana raiamandreny isan-tsehatra ity… Mila sy mitaky olona manam-panahy ny manao izany. Ilay fanahy maha olona no tokony omen’ny fiarahamonina lanja mba hivoahan’ny tena raiamandreny afaka hiahy ireo hiadidiany!